Famerenana ny fandriampahalemana | Primature
Famerenana ny fandriampahalemana
Lapan’i Mahazoarivo, ny 24 oktobra 2021 – Nitohy tao amin’ny Kaominina Ambanivohitr’i Betsipolitra, distrikan’i Miandrivazo, Faritra Menabe ny dian’ny delegasiona, iraky ny Filohan’ny Repoblika, izay notarihin’ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, ho fametrahana sy famerenana ny filaminana sy ny fandriampahalemana.
Tanjona ny famerenana ny fandriampahalemana ao anatin’ny fotoana fohy. Ho fanatrarana izany anefa dia ilaina ny fiverenana an-doharano, hoy ny Praiminisitra dia ny fandalana ny fihavanana izay mitaky fifanomezan-tanana sy fifandeferana ary ny fikatsahana ny soa iombonana.
Araka izany dia tokony hajanona hatreo ireo adiady sy fifandonana amin’ny fokontany sy kaominina mpifanolo-bodirindrina izay sakana amin’ny fampandrosoana sy miteraka tsy filaminana.
Niantso ny tompon’andraikitra ao an-toerana ny Praiminisitra ny hijerevana ny hampitsaharana ireo karazana valifaty misy eo anivon’ny fiarahamonina ary ny hanaovana fanentanana haingana amin’ny fampiroboroboana sy hapanjakàna ny fihavanana
Tompon’antoka amin’ny famerenana ny filaminana sy fandriampahalemana amin’ny toerana iray ireo mpitandro ny filaminana, tsy izy ireo ihany anefa no tompon’antoka amin’izany fa mila fiaraha-miasa amin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny eny ifotony ihany koa .
Ho fandraisana andraikitra sy ho famongorana ny halatr’omby ary dia nanome toky ny ben’ny tananan’i Betsipolitra fa tsy hanaiky ny fialokalofan’ireo dahalo sy olon-dratsy ao amin’ny fari-piadidiany.
Mikasika ny fampandrosoana indray dia lalantsaina napetraky ny fitondram-panjakana ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana sy fotodrafitrasa eny anivon’ireo distrika sy kaominina, izay fomba fiasa hahafahanan’ny fanjakana foibe manakaiky kokoa ny vahoaka ary mitondra vahaolana haingana sy maharitra.
Isan’izany ny hijerevana ny fanamboaran-dalana hialana amin’ny fitokana-monina sy hahafahana mamoaka ireo vokatra, eo koa ny fanatsarana ny fanabeazana izay fototry ny mahaolona ary ny fametrahana tobim-pahasalamana.
Mitaky fandraisana andraikitra hoan’ireo solontenam-panjakana, sy tompon’andraikitra na olom-boafidy na olom-boatendry any an-toerana anefa ny fanantanterahana izany.
Izay indrindra no nanaovan’ny Praiminisitra fanentanana ireo tompon’andrakitra rehetra hiasa amin’ny fahamarinana.
Nanome toromarika ho an’ireo tompon’andraiki-panjakana indrindra fa ny Governoran’ny Faritra Menabe, ihany koa ny Praiminisitra, ny hijerevana ny fomba hanokafana ireo toerana any ambanivohitra ary hahafahana mampifandray mivantana an’i Betsipolitra sy Miandrivazo.
← Fitsidihana ny Faritra Amoron’i Mania sy ny Faritra Menabe
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture – FAO →
Fivoriana mikasika ny drafi-pirenena marolafy iatrehana ny valan’aretina Corona virus
Fitsidihan’ny Praiministra any amin’ny tapany atsimon’i Madagasikara-Amboasary atsimo